सन्तुष्टिका लागि यौनसम्पर्क गर्दा योनी कस्तो हुनु पर्छ ? – SN-One of the news portal in Nepal
सन्तुष्टिका लागि यौनसम्पर्क गर्दा योनी कस्तो हुनु पर्छ ?
एजेन्सी २०७६ असार २९, आईतवार १६:१८ मा प्रकासित
जीवनको सबैभन्दा महतवपुर्ण मध्येको एक कार्य यौन सम्पर्क गर्दा योनी कस्तो हुनु पर्छ ? किन ? थाहा पाई रख्नुहोस महिला सम्भोगको लागि तयार नभएको अवस्थामा पनि योनी कसिलो हुन्छ। अर्को कारण,पर्याप्त मात्रामा महिला सम्भोगको लागि तयार नभएको अवस्थामा पनि योनी कसिलो हुन्छ ।
अर्को कारण, पर्याप्त मात्रामा प्राक्क्रीडा नगरेको कारण उत्तेजनामा आउन नसक्दा पनि योनी कसिलो हुन्छ।पूर्ण संतुस्ती पाउनको लागि यौनसम्पर्क गर्दा योनी कस्तो हुनु पर्छ ? किन ? थाहा पाई रख्नुहोस :
प्रायः महिलालाई ३० मिनेट जति प्राक्क्रीडाको लागि समय दिनुपर्छ। प्राक्क्रीडा गर्दा प्रेमपूर्ण रूपमा अंकमाल,स्पर्श गर्नु आवश्यक हुन्छ। यसो गर्दा महिलाको योनीको तनावपूर्ण संकुचन कम भई योनी लचकदार हुन्छ। यस्तो बेलामा उत्तेजित लिंग पसाउनु राम्रो हुन्छ। समय दिएर प्राक्क्रीडा गरेर योनीमा लिंग पसाउँदा महिलाले साह्रै दुखाइ महसुस गर्छ, सम्भोग गर्न मान्दैन भने भेजिनिसमस भन्ने रोग पनि भएको हुन सक्छ।
तनावको कारण संकुचित भएकोले कसिलो भएको भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। यसले पुरुष-महिलाको सम्बन्धमा पनि खलल पैदा हुन सक्छ। महिलाको योनीको खुकुलोपन सम्भोगपश्चात् कायम रहन्न। कतिपयले धेरै सम्भोग गरेर योनी खुकुलो भएको ठान्छन्। यो पनि गलत धारणा हो। सम्भोग धेरै वा थोरै गरेर योनी कसिलो वा खुकुलो हुने हुँदैन। योनीको मांसपेशीको विशेषता भनेको जस्तो आकारको लिंगसँग ठीक हुन सक्छ। त्यही सानो योनीबाट बच्चा जन्मन्छ। बच्चा जन्मिएको केही समयमा फेरि योनी पुरानै आकारमा पुग्दछ।
यो नै योनीको विशेषता हो।केही महिलामा बच्चा जन्माएपछि योनीको मांसपेशी पुरानै आकारमा आउन समय लाग्ने वा केही खुकुलो हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा योनीसम्बन्धी केही कसरत गर्न सकिन्छ। केगेल कसरत विधिः योनीको मांसपेशीलाई कसिलो पार्न यौन चिकित्सकहरूले केगेल कसरत गर्ने सल्लाह दिन्छन्। यो विधि आफैँले कुनै पनि बेला, कुनै पनि स्थानमा बसेर गर्न सकिन्छ।केगेल विधि गर्दा पिसाब फेर्दा मांसपेशीलाई खुम्च्याउने र पिसाब रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ।
यसलाई शुरुमा एक सेकेन्डसम्म योनी खुम्च्याउने, खुकुलो बनाउने यसलाई बढाएर पाँच सेकेन्डसम्म पुर्याउनुपर्छ। बिस्तारै यसलाई १० देखि १५ सेकेन्डसम्म खुम्च्याउने, खुकुलो बनाउने गर्नुपर्छ। यसलाई दिनमा धेरै चोटिसम्म गर्न सकिन्छ। नियमित केही हप्तासम्म केगेल कसरत गरेमा योनीको मांसपेशीमा कसिलोपन आउँछ। विदेशतिर योनी कसिलो बनाउन अपरेसन गरी योनीको मांसपेशीलाई कसिलो बनाउने पनि गर्छन्।
अहिले नेपालमा योनी कसिलो बनाउन योनीमा लगाउने क्रिम, तेल, मसाजरहरूको धेरै विज्ञापन गरिन्छ। तर, यस्ता साधन भरसक प्रयोग नगरेकै राम्रो! यिनले योनीको प्राकृतिक क्षमतालाई हानि पनि पुर्याउन सक्छन् । प्राक्क्रीडा नगरेको कारण उत्तेजनामा आउन नसक्दा पनि योनी कसिलो हुन्छ। उक्त बेला योनीमार्गमा पर्याप्त मात्रामा यौन रस पनि निस्केको हुँदैन।
यस्तो बेलामा यौन सम्पर्क गर्दा महिलालाई पीडा हुन्छ। तर, पुरुषहरू चाहिँ कसिलो योनीमा सम्भोग गर्न पाएकोमा गर्व गर्छन्। वास्तवमा योनीमा मानिसहरू चरम यौन सन्तुष्टि पाउन अनेक उपाय खोजिरहेका हुन्छन्। कति पुरुष महिलाको योनी कसिलो नभएको कारणले यौन सन्तुष्टि नपाएको कुराले चिन्तित हुने गरेको पाइएको छ।
दिनहु वा दिनमा पटकपटक यौनसम्बन्ध राख्नेहरुबारे यस्तो खुलासा
महिलालाइ उत्तेजित बनाउने ‘फिमेल भियाग्रा’ले मच्चियो बबाल
महिलाको उमेर अनुसार शारीरिक सम्बन्धबारे नयाँ अध्ययनले गर्यो यस्तो खुलासा
के एकपटक कुमारीत्व गुमाईसकेपछि पुन प्राप्त गर्न सकिन्छ ?
म २२ वर्षीया विवाहित महिला हुँ, विवाहदेखि नै हामीबीच असुरक्षित यौनसम्पर्क हुँदै आए पनि श्रीमानले वीर्य बाहिर फ्याँक्नुहुन्थ्यो, के वीर्य बाहिर खस्दा पनि गर्भ रहन्छ र ?